Abapaki - imishini yokwakha enzima, eyenzelwe ukumba umhlaba. Ifakwe ibhakede kanye neklabhu endaweni ejikelezayo. Ikhebhu itholakala phezulu komshini, ingashintsha kuzo zonke izikhombisi-ndlela, inikeze umbono ophelele kanye nokuhamba okuphezulu kwe-excavator. Lokhu kubaluleke kakhulu kwiyunithi yesenzo esinjalo.
Izindlela zokuhamba ngezintambo
I-excavator ye-Rope idinga izintambo zensimbi ezinamandla futhi ezinokwethenjelwa , ezisiza umshini ukwenza zonke izinhlobo zokuhamba nokunyakaza. Yonke imisebenzi ye-excavator ye-hydraulic yenziwa ngokusebenzisa umthamo okhethekile, nge-cylinders kanye nama-motor. Ngokuphathelene nokusebenza okulinganayo kwe-cylinders, i-mode mode yokusebenza ihluke ngokuphawulekayo nakwe-excavator ehamba ngekhebula.
I-excavator: iyini? Ubani owasungula?
I-excavator - indlela ephumelela kakhulu yokusebenza nomhlabathi, kanye namalahle kanye namanye amaminerali. Ukukhulunyelwa kokuqala kwe-giant giant-shattering giant kuhlangene e-diary kaLeonardo da Vinci, owadala umshini onjalo futhi wawahlola.
Kodwa-ke, kukholelwa ukuthi umdali walesi simiso wayengekho yena. Ukwakhiwa okufanayo, okukhumbuza abavuli bamanje, basetshenziswe eGibhithe lasendulo lapho bakha amathempeli ahlukahlukene namapiramidi amakhulu.
Izinhlobo zabafaki kanye nomsebenzi wabo
Abafaki-mbumbulu kuyindlela esetshenziselwa imisebenzi eminingi, njengemigodi yokugaya, ukusekela izizinda, ukumba imigodi, yonke imisebenzi yehlathi, ukubhujiswa kwezakhiwo noma amadamu. Zibuye zisetshenziselwe ukuhlelwa komhlaba, ukumba izimayini zamaminerali ezihlukahlukene, ukujulisa izikhukhula nemifula, ukufakwa kwamakholi jikelele.
Nomaphi lapho inqwaba yamadwala asebenzayo noma umhlaba ovamile kufanele ikhishwe futhi uhanjiswe kakhulu ngokwezomnotho nangempumelelo, izivuno ezinkulu ezijikelezayo zisetshenziselwa ukuthola izingxenye ezijulile zempahla eluhlaza. Njengoba izinhlelo zezimayini, kanye nezici zezintaba, zingahluka ngokuphawulekayo, abavuli bahlinzekwa ngezilungiselelo ezahlukene. Ngakho-ke, futhi umsebenzi wabo kanye nokuphathwa kwabo kuzohluka kancane, kodwa okuyisisekelo semisebenzi ngokuvamile ihlala ingashintshi. Izivuli zingaxhunyaniswa nebhuloho elikhethekile lokuhambisa, futhi lixhunywe nendawo ethile yempahla.
Abafuyi bafika ngobukhulu obuhlukahlukene, phakathi kwabo kuncane kakhulu, futhi baningi kakhulu, kodwa kukhona abaholi abathile ukuthi akekho enye imoto engadlula ubukhulu. Izindlela ezinjalo zilukhuni ukuhamba, kepha umthamo womsebenzi owenziwa ngabo awukwazi ukudlula ngisho nemishini emincane encane.
I-excavator i-Bagger-288: umlando wokudalwa kwe-giant
Le ndlela, eyenziwe yinkampani eyaziwayo yaseJalimane i-Krupp yenkampani yamandla neyezimayini uRheinbraun, i- excavator ye-rotary, noma umshini wokumba umakhalekhukhwini. Lapho ukwakhiwa kwalo kuphelile (ngo-1978), isetshenziswe yi-NASA njengomthumeli wesibungu sokudluliselwa komshini we-Apollo. Le ndlela ngokwayo ikhiqizwa iMarion Excavator njengemoto enkulu kunazo zonke ezweni, elinesisindo esingaphezu kwamathani ayi-13. Lokhu kwenza kokubili ukufakwa nokuxoshwa kwalo mshini ngokubizayo kuyabiza futhi kuyinkimbinkimbi. Ukungaboni bukhoma lo mkhulu omkhulu , kungelula ukuqonda ukuthi yini i-Bagger-288.
Izinzuzo zomshini omkhulu
Umfuyi we-Bagger-288 omkhulu kakhulu, ongubuciko obubuchwepheshe obuhlukile, okwakhiwe kumisebenzi yokumbiwa kwamalahle okude eJalimane. Ingakhipha amathani angaba ngu-240 000 wamalahle noma ama-cubic amamitha angu-240 000 edwaleni ngosuku, okulingana nokweba ngamamitha angu-30 (98 amamitha) ejulile endaweni enebhola lebhola. Lokhu akukwenzeki kwabanye abavuyi, abangakwazi ukufeza isigamu somsebenzi onjalo ngosuku. Amalahle, athathwa ngaye ngosuku olulodwa, agcwalisa izinqola ezingu-2 400 ezithwala izinto eziwusizo emafenjini ukuze kusetshenziswe. I-Operation Bagger idinga ama-megawatts angu-16.56 angaphandle kwamandla. Lokhu kuvumela ukuba ahambe ngesivinini samamitha angu-2 kuya kwangu-10 ngomzuzu (kusuka ku-0.1 kuya ku-0.6 km / h). I-chassis yesigaba sayo esiyinhloko ingamamitha angu-46 ububanzi. Indawo enkulu yezinambuzane ezinkulu zicindezela ama-Bagger-288 amancane kakhulu (17.1 N / cm 2 noma ama-24.8 amakhilogremu ngamasentimitha ayisithupha). Lokhu kuvumela umthumbi ukuba uhambe ngokukhululekile emhlabathini, umhlaba ngisho notshani, ungashiyi imidwebo ephawulekayo, ebaluleke kakhulu lapho usebenza ngamadwala. Ekuqaleni, lo mvubi walungisa amasondo okuhamba phambili kokuhamba kwawo, kodwa ekuhlolweni kokuqala lo mbono wabhekana nokuhlukunyezwa okukhulu, njengoba imoto yawela ngokushesha, ayikwazi ukulwa nesisindo sayo. Amacimbi abe yisisombululo esihle kunale nkinga. Esikhathini esizayo, kuhloswe ukuwafaka esikhundleni somoya, okuzokwenza ngcono ukwehlisa ingcindezi ebusweni ngaphansi kwe-excavator. I-radius yokujika ephansi ye-Bagger-288 ifinyelela kumamitha ayi-100, okuyinto inkomba enhle kakhulu lapho isebenza namaminerali, ukukhishwa kwayo okuwumsebenzi owedlula isikhathi.
Ngo-February 2001, i-Bagger-288 yayisuse ngokuphelele umthombo wamalahle emayini yaseTagebau futhi yayingasadingeki lapho. Kwaqunyiwe ukuba umthuthele kwelinye igoli. Emasontweni amathathu kamuva, umthumbi wahamba uhambo olungamakhilomitha amabili nambili ukuya eTagebau Garzweiler, edlula i-Autobahn 61, endleleni ewela umgwaqo wesitimela nemigwaqo eminingana engcolile. Lolu hambo ludla cishe ama-DM ayizigidi ezingu-15 futhi ludinga usizo lweqembu labasebenzi abangamashumi ayisikhombisa abasebenzisa ukulawula okugcwele phezu kokunyakaza kwe-excavator. Ukuze awele umfula, kwakhiwa ama-pipe amakhulu ensimbi, lapho angadlula khona. Babembozwe ngamatshe negravel kusuka phezulu. Kwakuhlwanyelwe utshani obukhethekile ukuze kulungiswe indawo yesikhumbi endaweni ekhethekile kakhulu. Naphezu kwezindleko ezinkulu zokuthutha i-Bagger-288, le ndlela yokuhamba nayo yayingcono ukwedlula ukudilizwa okuphelele futhi ihamba ezindaweni ezithile, okuzodinga imishini eminingi nesikhathi esengeziwe.
Izinzuzo zendlela ehlukile
I-Bagger-288 iyingxenye yeqembu labavuli bayizilinganiso ezifanayo. Iqukethe iBagger-281 (eyakhiwe ngo-1958), i-Bagger-285 (1975), i-Bagger-287 (1976), i-Bagger-293 (1995) nezinye izingxenye.
I-Bagger-288 iboniswe ngo-2012 ku-movie ethi "Ghost Rider: The Spirit of Vengeance," lapho i-Ghost Rider (i-protagonist yomdwebo) isebenzisa khona ukuze anqobe izitha zakhe.
Njengoba umshini omkhulu kangaka odumile, umculi uhlabelelwa nezingoma eziningana zamaqembu aseMelika. Abantu abaningi, bebona leyunithi, ngokushesha bayazibuza: "Bagger-288 - yikuphi lokhu?" Emva kwakho konke, ukubona kwalokhu mshini omkhulu kakhulu kumgqugquzela wonke umuntu osibonayo, okwesabisa nokwesaba.
Ukwakhiwa okukhulu okunjalo kudinga ukunakekelwa okukhethekile. Izisebenzi ezingaphezu kwezingamashumi amabili zisebenza kuphela ekusebenziseni i-excavator. Njalo ezinyangeni ezimbili, yonke inqubo igcobile, ngoba izindleko zokulungiswa uma kwenzeka ukuphazamiseka kuyoba yinto elula kakhulu. Zonke izinyathelo kufanele zibalwe futhi zihlelwe, ikakhulu lapho zenzeka ezimayini eziyingozi, ukuze okuthile kungathinteki noma kuqedwe. Phela, lokhu kungalimaza kokubili umsebenzi nomshini uqobo.
Le ndlela engavamile ayiyona nje i-excavator, ngoba abanye abantu sekuyisikhathi sokuphila. Kuze kube manje, abaningi banesithakazelo kumfuyi we-Bagger-288. Uphi manje le giant, ngeshwa, ayaziwa.
Zil-MMZ-554 futhi izici zayo
Hepatitis C nokukhulelwa. Pro ne con
Forex: Yiziphi amaphuzu kokuphenduka
Indlela yokwenza uthango e "Maynkraft": isitatimende
Ngasiphi ukuphakama hang hood? Extractor fan egumbini lokugezela. Extractor fan ekhishini
"Gobsek": isifinyezo sezinto indaba engafiyo Balzac